काठमाडौं, २३ कात्तिक । सन् १९६२ को अक्टोबर महिनामा भारत र चीनबीच भयंकर सीमा युद्ध भयो । छोटो अवधिमै समाप्त भएको सो युद्धमा भारतका १३८६ सैनिक मारिए, १६०० भन्दा धेरै हराए । चीन तर्फ ७२२ सैनिक मारिए ।
युद्धको मुख्य कारण ब्रिटिश कम्पनी सरकारले एकतर्फी रुपमा बनाएको सिमांकन वा नक्सा थियो । ब्रिटिश सरकारले बनाएको उक्त नक्सा चीनलाई चित्त नबुझ्नाले दुबै मुलुक युद्धमा होमिए । युद्धको समयमा भारतीय फौजको हार हुदै गयो र भारतीय सेनाहरु पछि हट्न सुरु गरे ।
यसरी भारतीय फौज पछि हटने क्रममा रणनीतिक हिसाबले महत्वपूर्ण रहेको नेपालको कालापानी क्षेत्रमा नै अड्डा जमाएर बस्न थाले । त्यसपछि भारतीय सेना कालापानीमा निरन्तरत रुपमा बस्दै आएको छ । आफ्नो भौगोलिक स्वामित्व रहेको क्षेत्र यसरी वर्षौंदेखि छिमेकी मुकुकको परेड खेल्ने थलो बनिरहँदा पनि प्रतिकार स्वरुप एक शब्द बोल्न नसक्ने हाम्रो देशका राष्ट्रघाती नेताहरुको अकर्मण्यता र अदूरदर्शिताले नै पटक पटक सीमा विवाद हुँदै आएको छ ।
हुन त, संसारभर ठूला देशले साना देशलाई हेप्ने र शक्ति प्रदर्शन गर्ने धेरै पहिलेदेखिकै अभ्यास हो । शक्तिसम्पन्न मुलुकले बल प्रयोग गरेर धेरै निमुखा देशहरु खर्लप्पै निलेका प्रशस्त उदाहरणहरु छन्। त्यसमा पनि रणनीतिक , व्यापारिक तथा सामरिक दृष्टिले महत्वपूर्ण रहेको कालापानी क्षेत्रमा भारतको आँखा गाडिनु स्वभाविक हो ।
भारतलाई जसरी हुन्छ, कालापानी आफ्नो बनाउनु परेको छ । त्यसैले ऐतिहासिक दस्तावेजहरु कुल्चेर नयाँ विवादहरु सिर्जना गर्न लागिपरेको छ । तर नेपाल सरकार वर्षौदेखि कानमा तेल हालेर शीत निन्द्रामा लमतन्न पसारिएको छ!
संसारभर ११५ मुलुकहरुकाबीचमा साना ठूला सिमा विवाद भैरहेका छन् । बलिया र शक्तिशाली राष्ट्रहरुले युद्धको रुपमा प्रतिकार गर्छन्, अन्तर्राष्ट्रिय पहलकदमी, युद्ध र वान टु वान वार्ताबाट समस्या सुल्झाउने प्रयत्न गर्छन् । तर नसक्ने कमजोर राष्ट्रहरु फेसबुक, ट्वीटर, वाकयुद्ध, पुत्ला दहन र विज्ञप्तिमै सीमित हुन्छन् ।
नेपाल आर्थिक, राजनैतिक तथा कुटनीतिक सबै पक्षबाट कमजोर भएकै कारण अहिले आफ्नो कायरता प्रस्तुत गरिरहेको छ । बुधबार परराष्ट्र मन्त्रालयबाट केही डरपोक र पढेर पनि विज्ञताको अभाव भएकाले एउटा विज्ञप्ति जारी गरे । तर हस्ताक्षरकर्ताको नाम र पद विहीन विज्ञप्तिको खेस्टो अति नाजुक, बेवारिसे र लज्जास्पद छ!
देशमा यति ठूलो संकट आउँदा पनि यस्तो लापरवाही र ग़ैरज़िम्मेवार काम गर्ने भँडुवाहरुले हाम्रो लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी जोगाउन सक्लान् भन्ने कुरामा म विश्वस्त छैन। यिनीहरु मौक़ा परे कमिशनमा पूरै देश नामसारी गर्ने दलालहरु हुन्! खानका कालहरु हुन्!
बरु जति क्षमता छ हामी जनतामै छ। तसर्थ आउनुस्, सडकबाट आउनुस्, सन्जालबाट आउनुस्, जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ त्यहाँ त्यहाँबाट देशको सार्वभौमसत्ता, स्वाभिमान, एकता र अखण्डताका ख़ातिर आवाज़ उठाऔं र मोदीको दादागिरी देखाउने बेइमानी जिब्रोलाई सिमानामा धूलो चटाऔं..!